नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): राति सुतिरहेका एकै परिवारका चार जनालाई काटेर हत्या !
राति सुतिरहेका एकै परिवारका चार जनालाई काटेर हत्या !
अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती खेलाडी उपेन्द्रदास बैरागीको बिहीबार साँझ सदरमुकाम गौरमा गोली हानी हत्या गरिएको छ ।
उदयपुर / अज्ञात समूहले बुधबार राति सुतिरहेको अवस्थामा उदयपुरको ठानागाउँ गाविस- ५ थुम्कीका एकै परिवारका चार जनालाई काटेर हत्या गरेका छन् भने एक बालकको अवस्था गम्भीर रहेको छ । हतियारसहित आएको समूहले ५० वर्षीय खेसबहादुर मगर, उनकी पत्नी ४० वर्षीया हर्कमाया मगर, दुई छोरीको हत्या गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीले जनाएको छ । मृतक खेस बहादुरका ९ वर्षीय छोरा नेत्रकुमार मगरको टाउको र शरीरका विभिन्न स्थानमा चोट लागेको र उनको अत्यधिक रक्तस्र्राव भएका कारण अवस्था गम्भीर बन्दै गएको ठानागाँउका स्थानीय बासिन्दा महेन्द्र मगरले बताएका छन् , चार छोरी, दुई छोरा र पत्नीसहित आठ जनाको परिवार रहेका खेसबहादुरकी दुई छोरी र एक नाबालक छोरा भने सकुल रहेको दलबहादुरले बताए । एउटी छोरी जिल्लाको कटारी बजारमा ज्याला मजदुरी गरेर उतै बस्ने गरेको र अर्की कान्छी छोरी ११ महिनाको मात्रै भएकोले उनलाई हत्याराले केही नगरेको आफन्त महेन्द्र मगरले टेलिफोनमार्फत बताएको प्रहरीले जनाएको छ । हत्याको कारण र समूहको पहिचान हुन नसकेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । मृतकका
आफन्तले घटनाबारे प्रहरी चौकी रुपटारलाई बिहीबार बिहान जानकारी दिएको प्रहरीले जनाएको छ, हत्याको जानकारी आएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीबाट प्रहरी निरीक्षक अनिल पौडयालको नेतृत्वमा घटनास्थलतर्फ प्रहरी खटाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्रप्रसाद उप्रेतीले बताए
आफनै जन्मदिने आमालाई हत्या गरेको अभियोगमा एक युवकलाई आईतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सिन्दजुरे, ९ स्थायी घर भई काहुँखोला बस्ने ३३ वर्षीय मनबहादुर गुरुङलाई ६५ वर्षीया बेलकुमारी गुरुङलाई हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । घरायसी विवादका क्रममा आमाको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । काठको ठेक्का पट्टा गर्ने मनबहादुरले भने आमालाई खाना खानका लागी भन्दा नमानेपछि धकेल्दा लडेर मुत्यु भएको प्रहरी बयानमा बताएका छन् । मनबहादुर काठको ठेक्कापट्टाको काम गदै आएको प्रहरीले बताएको छ । घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक प्रेमबहादुर बस्नेतले बताए ।
अज्ञात समूहले रौतहटका पूर्व अन्तर्राराष्ट्रिय कुस्ती खेलाडीको बिहीबार साँझ गोली हानी हत्या गरेको छ । सदरमुकाम गौरको मुख्य चौकमा साँझ साढे आठ बजे दासमामाथि पछाडिबाट गोली प्रहार गरी उक्त समूह फरार भएको थियो । उनलाई गोली प्रहार गरेको स्थानमा प्रहरी चौबिसै घण्टा ड्युटी बस्ने गर्छ । तर दासमाथि गोली प्रहार भएको प्रहरीले समेत पत्तो पाएन ।
सदरमुकाम गौर नगरपालिका- ८ स्थित कर्मचारी मिलन केन्द अगाडि सवा ८ बजे साथी सँग गफ गरिरहेको बेला अज्ञात समुहले पछाडीबाट अन्तर्राराष्ट्रिय खेलाडी उपेन्द्र दास बैरागीमाथि गोली प्रहार भएको हो । ४५ वर्षीय दासको पछाडीबाट गोली वारपार भएको थियो । दासलाई तत्कालै उपचारको लागि अस्पताल लैजाँदा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विगत एक दसक बढि समयदेखि दास असुरक्षाको कारण जनाउँदै आफ्नो गाँउ प्रेमपुर गोनाही गाविस छाडेर सदरमुकाम गौर बस्दै आएका थिए । नेपालमा भएको आठौं साफ खेलकुद प्रतियोगितामा दासले कुस्ती खेलमा कांस्य पदक जितेका थिए । सुरक्षाकर्मीको पहराको बाबजुद पनि दासको हत्या भएको भन्दै रौतहट फुटबल सघ रौतहटका अध्यक्ष नेपाल कार्की र सितोरिया कराँते संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक पहाडीले घट्नाको भर्त्सना गरेका छन् ।
सञ्जय कुमार खड्का July 7, 2011 at 12:08 PM
के गर्ने अब सिधा साधा मान्छेलाई बाँच्न गाह्रो भयो / कस्ले कति खेर के गर्ने हो थाहा nai हुदैन /